Iindaba - SWITCH isilawuli
Isilawuli se-PRO SWITCH esingenazingcingo se-NINTENDO SWITCH / SWITCH LITE, esine-3-level TURBO function, i-4-level adjustable vibration, i-6-axis control motion control, i-key-key-up kunye nezitshixo zemephu.
1. [UMlawuli oMtsha woTshintsho loYilo]: Lo mlawuli wokutshintsha ufanelekile kwiNintendo Tshintshela kunye noTshintsho Lite.Ayinayo nje idizayini yomfanekiso okhethekileyo, kodwa inomsebenzi weTurbo, umsebenzi we-vibration we-high-frequency, inzwa ye-multi-gyro, i-key-key-up, iqhosha lemephu, umsebenzi wesikrini kunye neminye imisebenzi.Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye yeyona mveliso ilungileyo kubantu abathanda imidlalo.
2 [Umsebenzi we-turbo ohlengahlengiswayo]: Ngomsebenzi we-turbo, imisebenzi yokudubula ngokuzenzekelayo kunye ne-semi-automatic inokusetwa.Umsebenzi wokutshisa ngokuzenzekelayo womlawuli unokusekwa kwisantya se-5/12/20 ngamaxesha ngesibini.Ukuba uphinda iqhosha ixesha elide, uya kuziva udiniwe.Ngokusebenzisa umsebenzi wokudubula ngokukhawuleza, unokukhululeka kwimisebenzi elula yamaqhosha kwaye unciphise ukudinwa kwamaqhosha aphindaphindiweyo.
3. [I-gyroscope ye-Six-axis & multi-vibration]: I-gyroscope eyakhelwe ngaphakathi emithandathu ye-axis ukwenza imiyalelo yokusebenza kwenzwa ye-gyroscope ichaneke ngakumbi.Ikwanayo nomsebenzi wokungcangcazela okuphezulu, kwaye ubunzulu bokungcangcazela bunokulungelelaniswa kumanqanaba ama-4 (akukho nanye/ebuthathaka/eqhelekileyo/eqinile), enokulungelelaniswa kubungakanani bokungcangcazela obufanelekileyo okanye ubungakanani bokungcangcazela owuthandayo ngokohlobo lomdlalo. .Yonwabela amava emidlalo aziswa zisetingi zakho zesiko.
4. [Ibhetri enkulu yomthamo kunye nokusetyenziswa kwexesha elide]: Ifakwe ibhetri ye-550mAh, inokuhlawulwa ngokupheleleyo malunga neeyure ze-2, kwaye ingasetyenziselwa ngokuqhubekayo malunga ne-10 kwiiyure ze-15, ikuvumela ukuba ube nexesha lokudlala elingaphazamisekiyo.Kwaye inomsebenzi wokukhumbuza ibhetri ephantsi ukukukhapha.
5. [Uyilo olukhululekile kunye nobukhulu] i-ergonomically eyilwe i-streamlined grip, i-concave joystick, i-matte non-slip material ihambelana nesandla esingcono, inciphisa uxinzelelo lweminwe kunye nokuthintela ukubila.Kwaye ikhanya kakhulu, malunga ne-160g, ukuze ungadinwa emva kokuba uyibambe ixesha elide.
Ixesha lokuposa: Dec-10-2021